China enamavili Shopping Bag ukwenziwa kunye Factory | Ngqo
Ingxowa yeTayile yeTeyile
I-Eco Friendly Canvas Grocery Tote Bag
Ibhegi yeCotton Tote esebenza kwakhona
Indawo yokuhlamba iimpahla
Esebenza Revas Cotton Tote ...
I-Eco Friendly Canvas yokutya ...
Umqhaphu weTote Bag
Ibhegi yokuthenga esongelayo yenziwe ngeplastester, ehlala ixesha elide, eyomeleleyo kwaye engasindi kwaye kulula ukuyicoca kwaye yomelele. Ayinamanzi, ngenxa yoko akufuneki ukhathazeke ngamanzi okanye isuphu yokungcolisa iingxowa.
Ibhegi yokuthenga esongelayo yenziwe ngeplastester, ehlala ixesha elide, eyomeleleyo kwaye engasindi kwaye kulula ukuyicoca kwaye yomelele. Ayinamanzi, ngenxa yoko akufuneki ukhathazeke ngamanzi okanye isuphu yokungcolisa iingxowa. Le bhegi yokuthwala isiko ilula kunye nesitayile sehempe sisingatha indawo enkulu yeeplastikhi zokutya. Le bhegi yokutya inokuphinda isongeke iyisongele ngokwakho, kwaye iyenze ilungele ukuphatha nawe naphi na apho uya khona. Ungabeka ilogo yakho ebhalwe igama lakho ngaphambili kwibhokisi yokwazisa encomekayo kunye nefashoni. Ukuba unoluvo lokuyila, nceda usixelele, sinokukunceda ukuba ulugqibezele.
Zininzi izizathu zokuba kutheni abantu bengathanda ukusebenzisa ibhegi yokuthenga enokusonga kunengxowa yeplastiki yesiqhelo. Inqaku elongezelelekileyo lenza ukuba kube lula ukuphatha kunye neengxowa. Injongo yengxowa enokuphinda isetyenziswe kukusebenza, kwaye inokuqinisekisa ngokhuseleko lokuthenga. Xa kuthelekiswa nenye ibhegi yokuthenga yesiqhelo, ivenkile enokusongelwa yokuthenga ibhegi enokusetyenziselwa inikezela ngeenzuzo ezininzi zokwenza izinto.
Olu hlobo lwebhegi esongiweyo eyenziwe ngeplastikhi, kwaye ikwanokwenziwa ngomqhaphu, nonwoven, oxford. Oku kukuvumela ukuba ungadlulisi amandla kwiingxowa zakho ngokungahambi kakuhle, ngaphandle kobunzima. Okwangoku, iplastikhi iya kwandisa iindleko kubathengi kwivenkile enkulu, kunye nephepha kunye nengxowa enokuphinda isebenze iya kuthatha indawo yeplastiki. Ke ibhegi yokuthenga enokuphinda isongeke yenza ukubandakanyeka ngakumbi. Ingxowa yesiqhelo enokuphinda isongeke inokusetyenziswa malunga namaxesha angama-500. Ibhegi yokuthenga enokusongelwa inokusetyenziswa iminyaka emininzi, ke sisixhobo esikhulu sokwazisa, ke abathengi baya kuyiphatha ibhegi yakho yokuthenga kwaye bavakalise umyalezo malunga nenkampani yakho iminyaka emininzi.
Le yingxelo evela kubathengi bethu: “Ndihlala ndizilibala iibhegi zam ezinokuphinda zisetyenziswe kumboko wemoto yam xa ndisiya evenkileni.
Izinto eziphathekayo Non womluki / ipholiyesta / siko
Ubungakanani Ubungakanani obuqhelekileyo okanye isiko
Egqithileyo Ingxowa yeMesh yokuhlamba iimpahla
Okulandelayo: Ingxowa yokuthenga yakwaJute
Ingxowa yokuthenga eXineneyo
Ingxowa yokuthenga enokusongwa ngokuCwangcisiweyo
Ingxowa enamavili yokuthenga ukutya
Ingxowa yokuthenga enamavili yePolyester
Ingxowa yokuthenga enokusetyenziswa kwakhona
Ingxowa yokuthenga enokusongwa inokuphinda isebenze
Ingxowa yokuthenga esongekileyo
Inayiloni Shopping Bag
Ipholiyesta Shopping Bag
Ingxowa yokuthenga esongiweyo enokuphinda isebenze
Qengqa iNgxowa yokuthenga
Ingxowa yokuthenga enamavili
Ukuthengwa kwengxowa yokuthenga
Ingxowa yokuthenga Inayiloni
Ipholiyesta yeNgxowa yokuthenga
Ivenkile Yengxowa Epholileyo
Ukuthengwa kwengxowa enamavili
Inombolo 2, iNorth Caohe Road, iXuejia Idolophu, iSithili esitsha, iSixeko saseChangzhou, kwiPhondo laseJiangsu, China.